Costa de la Luz | Akụkọ Njem
Maria | | Spain obodo, Huelva
Oke osimiri Spain dị oke oke, kilomita 8.000 nke ụdị lithological dị iche iche nke meworo ka otu n'ime akụ kachasị mma na Europe. N'ezie, a maara oke osimiri Spanish site na aha ihe atụ ndị akọwapụtara nke ọ bụla n'ime ha: na Mediterranean na Costa Brava, Costa Dorada, Costa Blanca ma ọ bụ Costa Cálida; na Cantabrian n'ụsọ Green Coast ma ọ bụ Basque Coast; ke edem edere Atlantic Costa da Morte ye ke edem usụk Costa de la Luz.
Kpọmkwem, na post a anyị ga-ekwu maka Costa de la Luz. Otu mpaghara dị na ndịda ọdịda anyanwụ nke Andalusia nke gbatịrị na ụsọ mmiri nke ógbè Cádiz na Huelva, site n'ọnụ mmiri Osimiri Guadiana ruo Tarifa. Obodo ndi azu, aja ocha edo, osimiri na-amaghi nwoke na anwu n’aho nile bu ihe mkpali kacha mma ichota ala di egwu. Nwere ike soro anyị?
1 Kedu ka Costa de la Luz dị?
2 Njirimara nke Costa de la Luz
3 Kedu ihe ị ga-eme na Costa de la Luz?
4 Art na omenala na Costa de la Luz
Kedu ka Costa de la Luz dị?
Costa de la Luz na-enweta aha a n'ihi na anyanwụ na-awa n'ebe ahụ n'oge niile, ụbọchị 365 kwa afọ, nke na-asụgharị ọ bụghị naanị n'ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ mara mma kamakwa ihu igwe dị mma iji nwee ọ fromụ site na Jenụwarị ruo Disemba.
N'ebe a, anyị na-ahụ osimiri maka ihe masịrị gị niile: enwere ndị nwere ezigbo oge ezumike maka ndị chọrọ ị funụrị ọ ,ụ, enwekwara ụsọ osimiri maka egwuregwu mmiri dịka sọọfụ, kitesurfing ma ọ bụ windurfing ma ọ bụ osimiri ndị echebere maka njem. ọha mmadụ nọ na-amaghị nwoke. Breathe na-eku ume.
Njirimara nke Costa de la Luz
Osimiri Costa de la Luz nwere oke aja aja na-enweghị ngwụcha, ahịhịa ala na ọhịa pine. Ihe karịrị kilomita 200 na-ama akara ụsọ oké osimiri nke oké osimiri bụ protagonist. Ebe ị nwere ike ịkwụsị oge ma zuru ike na-atụgharị uche maka ọmarịcha ala ma na-agagharị n'oké osimiri dị ka Matalascañas na Mazagón na Huelva ma ọ bụ Bolonia na Valdevaqueros na mpaghara Cádiz.
Kedu ihe ị ga-eme na Costa de la Luz?
Na mgbakwunye na oké osimiri na anyanwụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ntakịrị ọrụ, ifufe na ebili mmiri nke Costa de la Luz zuru oke maka ibudata adrenaline na ịme egwuregwu mmiri dịka sọọfụ, kitesurfing ma ọ bụ windurfing. N'ezie, enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ maka nke a ma rụọ ọrụ ndị ọzọ dị jụụ dịka ụgbọ mmiri.
N'ebe a, ị nwekwara ike ịchọta Doñana National Park, ihe kachasị mkpa nchekwa na Spain, nke dị n'etiti ala mmiri ya, ala mmiri ya na anụmanụ ndị bi na ogige ahụ, dị ka flamingos mara mma, na-enye ihe ngosi enweghị atụ.
A maara nke ọma na ọtụtụ ọrụ a na-eme n'èzí na Costa de la Luz na-eme ka agụụ nwee agụụ na ọ kachasị mma ịmegharị batrị gị na nri dị mma. You nwere ike iji oge ịnọ ebe a chọpụta ụdịrị dị ka tuna tuna, shrimp na Sanlúcar ma ọ bụ prawn si Huelva, yana mmanya ọma Sherry ama ama n'ụwa niile.
Art na omenala na Costa de la Luz
Ndị hụrụ nka na ọdịbendị n'anya nwekwara ebe mgbaba ha na Costa de la Luz. Otu n’ime obodo kachasị mkpa n’akụkọ ihe mere eme na Spen bụ Cádiz, nke ga-eju gị anya site na ụlọ ya ọcha, nke ụlọ na chọọchị na-agbachitere jupụtara.
Ma n'ime ime obodo Cádiz bụkwa ebe mara mma ileta. N'ime ya anyị hụrụ obodo iri na itoolu dị larịị nwere mgbidi ọcha na-acha ọcha dị na ugwu bụ otu n'ime akwụkwọ ozi ndị njem na-achọkarị. Ebe anaghi emezi ka mmadu ju ihe okike.
Banyere ógbè Huelva, ụfọdụ obodo nwekwara akụkọ ihe mere eme. Obodo ndị dịka Moguer ma ọ bụ Palos de la Frontera na-anabata gị ebe Columbian. N'ime ha ị ga-enwe ike ịmata ka esi hazie njem ndị Christopher Columbus mere iji ruo America. Na Huelva, n'etiti ọnwa Mee na June, njem El Rocío na-eme kwa afọ. Njem a, nke kachasị ewu ewu na Spain, na-eme njem njem ọillsụ ruo mgbe ọ ruru obodo Almonte.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Ọ bụ Costa de la Luz